Gabadh maqalka naafo ka ahayd oo codkeeda heshay, maqalkana rajeyneysa - BBC News Somali
Gabadh maqalka naafo ka ahayd oo codkeeda heshay, maqalkana rajeyneysa
Xigashada Sawirka, Guy’s and St Thomas’ NHS
Laia waxaa loo xiray qalab ka caawiyo maqalka
Leia Armitage oo 7 sano jir ah waxay muddo ku soo nooleyd iyada oo dhagaha naafo ka ah oo aan wax ka maqlin ilaa iyo laba jirkeedi, balse waxay mahadisay qalliin maskaxda looga sameeyey iyo daryeel joogto ah oo loo sameeyey.
Waxay marki ugu horreysay heshay codkeeda waxayna iyadoo hadleysa waaliddiinteeda ku tidhi 'waan idin jecelahay'.
Leia aabbaheed Bob wuxuu sheegay "in qalliinka ka hor gabadhiisu haddii agteeda bam lagu qarxiyo xataa aysan waxba maqli jirin, uuna xusuusto iney marki ay dhalatayba ogaadeen iney gabadhooda yar qabto nooc naadir ah oo dhago culeys ah."
Leia, oo ka soo jeedda magaalada Dagenham ee bariga magaalada London, xididdada iyo gunta dhegaheedaba waxba kama maqleyn, oo xataa ma aysan lahayn qaab ay ku qaadan karto qalabka maqalka ka caawiyo oo inta badan la siiyo dadka dhagaha naafada ka ah.
Koonfur Afrika oo meedaarta ka dhigaysa luuqad rasmi ah
Marxalado caafimaad oo aad u dheeraa oo ay soo martay kadib waxay Leia nasiib u yeelatay iney hadasho kadibna ay codkeeda maqasho iyada oo aan weligeed ku fikirin sidaas, waxaana qoyska gabadha walwalka ugu badnaa uu haystay marka loo sheegay iney gabadhooda tahay tii ugu horreysay oo maskaxda qalliin looga sameeyo, si maqalka loogu soo celiyo, waxaana qalliinkaasi lagu sameeyey iyada oo laba jir ah.
NHS England ayaa qalliinka ku tilmaantay "mid nolasha wax ka baddalay" iyada oo sheegtay iney maalgelineyso carruurta iyada la midka ah ee aan dhagaha wax ka maqlin isla-markaana xaalado la mid ah ku sugan sidii qalliimo noocan ah loogu sameyn lahaa.
Waxaa lagu qayaasay 15-ki carruur ee aan dhagaha wax ka maqlin oo baaritaan lagu sameeyo 9 ka mid ah inay u baahanayaan in qalliin lagu sameeyo.
Codka baauurta oo ay maqasho
Bob wuxuu yidhi: "Raadinta qalliinnada maskaxda ee noocan ah waxay u baahan tahay go'aan qaadasho aad u adag, laakiin waxaan dooneynaa inaan Leia fursadda noolasheeda ugu wanaagsan siinno."
Nin xaaskiisa dhagaha ka guray
Isaga iyo xaaskiisaba waxay rajeeynayeen qalliinka kadib iney gabadhooda ay wax maqasho sida guuxa gawaarida marka ay waddada tallaabeyso iyada oo nabad qabtana ay waddooyinka ka gudubto.
Hase yeeshee, shan sano kadib marki qalliinka lagu sameeyey, horumarka ay dhinaca maqalka ka sameeyneyso ayaa ah mid aad uga wanaagsan sidi ay ka rajeeynayeen.
Leia iyo waaliddiinteeda Bob, Alison iyo walaalkeed Jacob
Waxay Leia iney wax maqasho u billaawday si tartiib tartiib ah, waxayna markii ugu horreysay billaawday inay maqasho codka albaabka tareenka halka uu ka imanayo marki qalliinka lagu sameeyey kadib.
Si tartiib ahna waxay billowday iney fahanto micna ahaan codka iyo waxa uu yahay iyada oo ay waaliddiinteeda ku celcelinayeen ereyo, iyaga oo ka dalbanayey gabadhooda ereyga ay ku celceliyaanba iney iyadana ku celiso.
Hadda, marki tijaabo iyo isku day badan oo ku celcelinta ereyada ay sameeysay kadib waxay ku guuleysatay iney jumlado sameeyso, iney codkeeda kor u qaaddo iyo iney codkeeda ku duubto taleefankeeda gacanta dibna ay u dhageysato.
Sidee buu wariye Bashka Jug Soo Dhacay taleefoon ugu waraystay nin dhagool ah?
"Waan u yeernaa marka ay dabaqa sare saaran tahay oo aan annagana dabaqa hoose ku sugannahay, wey na maqashaa weyna noo timaaddaa" ayuu yiri Bob isaga oo sii faahfaahinaya qalliinka kadib sida ay gabadhooda isu beddeshay.
'Waan ku jecelahay'
Leia waalidiinteeda waxay mahadcelin ballaaran u jeediyeen macallimiinta iskuulka lagu barto luqadda meedaarka, oo gabadhooda ay si fiican wax uga soo baratay.
"Aabo waan ku jecelahay markay i tiraahdo Leia waa ereyga iigu farxadda badan oo aan maqlo" ayuu yiri Bob.
"Marka aan habeenki seexinayo waxay igu tirahdaa 'habeen wanaagsan hooyo', waana erey aan nolasheeyda iyada ka filanin" ayey tiri Alison oo ah Leia hooyadeed.
Qaliinka maskaxda marka looga sameeyo carruurta maqalka la', waxaa toos loo gelinayaa qalab lagu furayo xididdada maskaxda gaarsiiya farriinta codka, waxaana lagu sameeyaa carruurta aan ku dhalan maqal ama neerfa caafimaad qaba.
Sawir muujinayo qallinka maskaxda halka looga sameeyo
Barafasoor Dan Jiang, oo ah la taliye dhinaca caawinta carruurta maqalka naafada ka ah, ahna madaxa xarunta caafimaadka qalliinka lagu sameyey ee NHS ayaa sheegay iney carruurta qaar ka horumarin karaan kartidooda hadalka.
"Badanaa natiijo wanaagsan ayaa ka soo baxda, inkasta oo ay natiijada ka soo baxeyso ay ku kala duwanaan karaan," ayuu yiri.
"Carruurta ay da'dooda hooseysana waxaa wanaagsan oo aan mustaqbalka dhaw isku dayi doonna inaan qalab maqalka ka caawiyo aan u gelinno inta ay yar yihiin."
Aroos naadir ah oo magaalada Gaarisa ka dhacay
"Waxaana la qabsiga iyo fahanka codka iyo waxa uu yahay ku wanaagsan ayuu yiri carruurta ay da'dooda shan jirka ka hooseeyso".
Susan Daniels, oo ah madaxa ururka ay leeyihiin dadka maqalka naafada ka ah ee heer qaran ayaa tidhi: "Ilma kasta oo maqalka naafo ka ah sida ugu habboon ee noloshooda wax looga beddeli karo waa in qalabka maqalka maskaxda ilmaha la geliyo."
"Haddii carruurta dhagaha naafada ka ah ay taageerada saxda ah helaan, waxay caruurtu si fudud ku soo ceshan karaan maqalkooda balse si carruur badan maqal la'aanta looga daweeyo waxaa loo baahan yahay maalgalin aad u xoooggan oo aan loo kala harin", ayey tidhi Susan.